एक बटुवाको लक्ष्य चुम्ने चाह : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार एक बटुवाको लक्ष्य चुम्ने चाह
By रुपक न्यौपाने
जोश थियो, जाँगर थियो । सपना थियो । अनि चाहना त कति कति- आकाशझैं जसको कुनै अन्त्य हुँदैन । चाहनाहरु मनभरि अनगिन्ति थिए । लाग्थ्यो सगरमाथा त एकैछिनमा चढ्छु । चाँडै फर्कन्छु अनि त्यो वेशक्याम्पको अँध्यारो त चुड्की बजाएको भरमा हराभरा बनाउँछु । त्यो वेशक्याम्प मात्र के, त्यो उजाडलाग्दो जमिनमा रङ्गीचङ्गी बगैंचा बनाउनेछु । अनि अरु यस्तै कति-कति चाहनाहरु… मनभरि थिए । कति थिए भनूँ- अनगिन्ति, वश् अनगिन्ति ।
वेशक्याम्पबाट सगरमाथाको यात्रा शुरु भयो । सोचेजस्तो सजिलो र जादुगरी कहाँ रहेछ र त्यो यात्रा । शुरुवातदेखि नै ठोक्किन थालेँ । परिवार छोडेर हिँडेको पीडाले भरी भएको मन, अनुभवको कमी अनि अल्लारे म । तर पनि के कम ? ममा चाहना जो थियो जति लडे पनि सगरमाथा पुग्छु नै भन्ने । पुग्ने मात्र के ? परिआए त्यसलाई पल्टाउन पनि सक्छु जस्तो लाग्थ्यो ।
बाटो भुलेको बटुवाजस्तो भएँ म । कति वर्ष त्यत्तिकै रुमल्लिएँ । बाँच्नका लागि सङ्घर्ष चलिरह्यो । बाटामा परेका या भेटेका स-साना पहाडहरु चढ्ने र लड्ने क्रम यसबीचमा चलिरहे । समय यसैगरी बिती नै रह्यो ।
जति चढ्दै गएँ । यात्राहरु अझै कठिन हुन थाले । जुन नक्सा कोरेर यात्रा तय भएको थियो, यति कठिन अवस्थाहरु आए कि ती बाटाहरु कता पुगे कता, कति हिमपात भयो । कहिले त्यहीँ वरिपरि भएको प्रकृतिसँग धेरै समय बिताएर यात्रामा ढिलाइ पनि भयो होला । म यति रुमल्लिएँ कि कुनै समय मैले बिर्सें- म त सगरमाथा चढ्न भनेर पो हिँडेको । वेशक्याम्पसँग पनि टाढा भएँ अनि त्यो चुचुरोमा पुग्ने चाह पनि घट्यो । बाटो भुलेको बटुवाजस्तो भएँ म । कति वर्ष त्यत्तिकै रुमल्लिएँ । बाँच्नका लागि सङ्घर्ष चलिरह्यो । बाटामा परेका या भेटेका स-साना पहाडहरु चढ्ने र लड्ने क्रम यसबीचमा चलिरहे । समय यसैगरी बिती नै रह्यो ।
आज फेरि धेरै वर्षपछि त्यही सगरमाथा चढ्ने जोश आएको छ । त्यो शुरुवातको जस्तो जोश अनि चाह त छैन । तर अनुभव पक्कै छन् । पाको भएको छु । केही त मैले गर्नु नै छ । कि त सगरमाथा पुग्नैपर्यो कि त वेशक्याम्प झर्नुपर्यो । यसबीच बाटोमा सानो क्याम्प त पक्कै बनाएको छु । तर मैले मेरो मनलाई कति ठगूँ- किनकि मेरो अन्तिम सत्य यति मात्र होइन । यात्रा जरुरी छ । भलै बाउन्न घुस्सा त्रिपन्न ठक्कर खाएरै किन नहोस्, लक्ष्य चुम्न यात्रालाई निरन्तरता त दिनु नै छ ।
-हाल सिड्नी, अष्ट्रेलिया
Editor-Picks सविन शर्मा - March 3, 2021 0
प्लान नेपालले दियो कालिकोटलाई स्वास्थ्य सामाग्री
विश्वनाथ सिम्खडा - May 29, 2020 0
कालिकोट । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोटलाई प्लान नेपालले स्वास्थ्य सामाग्री दिएको छ । मानवअधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरेन्डेक) नेपालको प्राविधिक सहयोग र प्लान...
हत्याराले औंठी छाडे, त्यहि औंठीबाट खुल्यो घटनाको रहस्य
अजय साह - February 13, 2021 0
बारा । महागढिमाई नगरपालिका वडा नम्वर १ बरियारपुरकी महिला हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मृतककी छिमेकी घनश्वेरी कुशवाहाले...
प्रमुख द्वारिका काफ्ले - May 7, 2020 0
प्रदेश ५ रासस - June 9, 2020 0
प्रदेश ३ रासस - January 26, 2021 0
स्याङ्जामा कोरोना जितेर ३४ जना घर फर्किए, थपिए २२ नयाँ संक्रमित
Breaking News श्रीकृष्ण सिग्देल - June 27, 2020 0
स्याङ्जा । स्याङ्जामा शनिबार ३४ जना कोरोना संक्रमितले कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् भने २२ जना संक्रमित थपिएका छन् । हालसम्म स्याङ्जामा कोरोना संक्रमण...
निकुञ्जमा अवैध कार्य गर्ने ५५ जना पक्राउ
प्रदेश ५ सुदीप अधिकारी - May 10, 2020 0
बर्दिया । लकडाउनको मौका छोपेर निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन तथा वन्यजन्तुको तस्करीमा लागेका तस्कर धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । लकडाउनको बेला बर्दिया...
रासस - March 3, 2021